Blip.tv Downloader: Olee otú Download Blip TV Videos na a Click
> Resource> Video> Olee otú Download Blip TV Videos na a Click
Olee otú Download Blip TV Videos na a Click
M a-eguzosi ike n'ihe esenowo nke Blip.tv. na n'ezie na-enwe oge na-ekiri Blip.tv vidiyo na m iPad. Otú ọ dị, ele Blip. tv videos kpọmkwem online, a elu na-agba njikọ Ịntanetị a chọrọ iji zere interrupting kwụsịtụrụ maka buffering. Iji wepu a ịgba, ga-amasị m ịkọrọ a blip.tv video dinta na m mgbe-eji eweta ọkacha mmasị m blip.tv egosi offline.
Nke ahụ bụ Wondershare AllMyTube for Mac (AllMyTube maka Windows), nke na-enye gị ike ibudata mkpachị si Blip TV na mfe otu Pịa. Wezụga ya, ọ na-atọghata mmepụta faịlụ ka dị iche iche formats na ngwaọrụ dị ka iPhone, iPad, Samsung Galaxy, PSP, wdg, nke mere na ị pụrụ inweta Blip. tv videos n'ebe ọ bụla. Ịtụnanya, ọ bụghị ya? Ugbu a dị nnọọ download n'okpuru free ikpe na-eje ije site na n'okpuru nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu.
1 Chọọ maka Blip TV videos na ibudata ya
Gaa Blip TV website, họrọ video ịchọrọ ibudata na-amalite na-akpọ ya. Mgbe ị na òké n'elu ebre window, ị ga-ahụ a "Download" bọtịnụ na-akpaghị aka na-egosi n'elu video. Ee, nke ahụ bụ nbudata ndọtị i arụnyere n'ime gị brower, n'agbanyeghị Safari, Chrome, ma ọ bụ Firefox. Ọ na-emekarị a smart sniffer ịchọpụta niile na-akpọ video dị na nchọgharị.
Ugbu a, họrọ si n'okpuru 3 nhọrọ nbudata a video.
Kpọmkwem pịa na "Download" bọtịnụ mgbachapụ Blip.tv video nbudata.
Detuo URL na adreesị mmanya, na mgbe ahụ kụrụ "Paste URL" ke akpan window.
Nanị ịdọrọ na dobe video URL na ngwa n'ọdụ ụgbọ mmiri ịgbakwunye ya na nbudata ndepụta.
N'oge nbudata usoro, na ị na-free ka ego ya ọnọdụ, kwụsị ma ọ bụ kagbuo nbudata ọrụ.
2 Watch ebudatara Blip TV videos
Pịa "Na" taabụ iji nweta ihe ọmụma zuru ezu faịlụ ọmụma niile ebudatara Blip TV videos. Ebe a, ị nwere ike ịhọrọ ngosi mode (Site icon ma ọ bụ table ndepụta) na n'elu nri akuku nke isi window. Right pịa ide onu, ị nwekwara ike mbubata gị Obodo FLV, MP4 videos ka a ihe tree maka mfe hapụụrụ. Chọrọ igwu ebudatara faịlụ? Dị nnọọ pịa video thumbnail na-enweta ya na magburu onwe ya mma. Na-ewere snapshots nke ọkacha mmasị gị ihe oyiyi bụ dịnụ.
3 tọghata ebudatara Blip.tv videos ka formats na ngwaọrụ (nhọrọ)
Si n'elu screenshot, ma eleghị anya ị na-ama chọpụtara na "tọghata" bọtịnụ na nri akuku nke ọ bụla video clip. Ee, nke a na-iji tọghata gị ebudatara faịlụ ka ọ bụla usoro maka gị adaba playback na kọmputa ma ọ bụ obere ngwaọrụ. Ebe a, ị ga-ahụ ọtụtụ ewu ewu video & audio formats, dị ka AVI, MOV, MP4, MKV, MP3, AAC, wdg
Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu mmepụta faịlụ na iPad, iPhone, Kindle Fire, PSP, Xbox, Zune, wdg, dị nnọọ họrọ ahazi preset maka ha n'okpuru "Apple" ma ọ bụ "Android" udi. Ha ga-arụ zuru okè na ngwaọrụ gị. Ahụghị gị chọrọ Ngwa? Echegbula onwe gị, ị nwere ike n'okpuru gị arịrịọ ka nkwado otu na-arịọ ha ka ha tinye ya na nke a na-eji ngwa ahụ.
1. Downoad na tọghata dị mfe otu click: Iji zọpụta oge gị na-eme converting mmepụta faịlụ aka, a video njikwa na-enye gị ike ibudata na tọghata n'otu oge na magburu onwe ya mma. Iji nweta ya malitere, dị nnọọ ịgbanwee na "Download Mgbe ahụ tọghata" button on wee họrọ gị chọrọ format ma ọ bụ ngwaọrụ.
2. Na-wuru nchọgharị (Windows version naanị): Ọ bụrụ na ị a Windows ọrụ (XP / Vista / 7/8 gụnyere), ị nwere ike ịmụta agbakwunyere media brower ịchọ ma na-ekiri online videos conveniently. Top gosiri online video saịtị na-nyere, gụnyere YouTube, Metacafe, MTV, Vemio, Hulu, Vevo, Ted, na ndị ọzọ. Dị egwu na ibudata ọkacha mmasị gị videos kpam kpam na mfe!
Ebe a bụ nzọụkwụ-site-nzọụkwụ video nkuzi:
Getflv Alternative: Download Online Video mma karịa Getflv
Nchọpụta nsogbu Atụmatụ maka ajụkarị Chromecast Issues
Top 20 Adobe Premiere Uzo mkpirisi ị ga-eji mgbe edezi Video Files
Olee otú Ọkụ na idetuo DVD ka DVD
Olee otú akuku WMV Files
WMV Splitter: Bee WMV ka Ọtụtụ agba